Homeसमाचारभगवान् शिवको नाममा सोमबार व्रत बस्ने चलन कसरी सुरु भयो ? यस्तो छ वास्त’विकता
April 26, 2021 admin समाचार 3234
सोमबार व्रत बस्ने चलन क’सरी सुरु भयो ?
सोमबार शिव’को व्रत बस्ने चलनको पछाडी धेरै कथा’हरु चलिआएका छन। यी कथाहरु मध्ये तीन कथाहरु बढी चर्चित छन्। पहिलो कथा एक गरिब ब्राह्म’णको बारेमा छ जसले शिवको व्रत पश्चात धन प्राप्त गरेको कथा छ। दोस्रो, एक धनी व्यापा’रीको छ। जसको छोरा थिएनन्। लामो प्र’तिक्षा पछि छोरा जन्मिए तर छोटो समयमै मृत्यु हुन पुग्यो। कथा अनुसार शिव र पार्वतिको कृपाले छोराको पुर्नजन्म भएको थियो। तेस्रोः शिव र पार्वती’ले खेलेको कौडा खेलको कथा छ।
कुनै पनि खा’लको व्रत वा उपवासले शारीरिक स्वास्थ्यमा प्रतक्ष प्रभाव पार्छ। समय समय’मा व्रत बस्नाले शरिरलाइ फाइदा पुर्या’उँछ। व्रतको धारणा परापुर्व’ककालका ब्राह्मणहरुले ‘ब्राह्मण धर्म’ प्रति मानिसलाइ आकर्षित गर्न प्रयोग गर्थे। यसले शारिरीक स्वास्थ्य’लाई नै राम्रो बनाउने हुँदा व्रत गर्ने आफैले नै अनु’भव गर्नसक्ने हुँदा हजारौं वर्षसम्म पनि यो प्रथा चलिआ’एकै छ। ओएस नेपालबाट
महिला ट्राफिक प्रहरीको यो रमाइ’लो टिकटक भाइरल, ४१ लाख ब’ढीले हेरे (भिडियो सहित)
May 26, 2021 admin समाचार 3897
अहिलेका युवा युवती हरु सामाजिक स’ञ्जालमा धेरै समय बिताउने गर्छन् । कसैले यसको राम्रो सदुप’योग गर्छन् त कसैले समय कटाउने माध्य’म मात्र बनाउँछन् । सामाजिक सञ्जाल आफ्ना कला, प्रस्तुति र लेख रचना हरु प्रस्तुत गर्ने
अब २ घण्टा मात्र सरकारी स’वारी साधन च’लाउन पाइने
May 27, 2021 admin समाचार 3181
अब सरकारी तथा सार्वज’निक संस्थान, बैंक, इन्टरनेट प्रदायक संस्था र टेलिकमका स’वारी साधन दुई घण्टा मात्र सञ्‍चा’लनमा आउने भएका छन् । जिल्ला प्रशासन काठमा’डौंका अनुसार १४ गते बिहान साढे ९ बजे’देखि साढे १० बजेसम्म र
March 18, 2021 admin समाचार 3337
पुण्य गौतम चिर’परिचित नाम हो उनि समाजिक सन्जालमा छाइ’रहन्छन बिभिन्न बिषयमा तर यस पटक भने उनि होचा पुड्का संघले आयो’जना गरेको एक कार्यक्रममा गएर उनिहरुलाई हौ’सला दिए उनले ठट्टा गर्दै भने कहिले काही त मलाई